EA020 - OMG Sensor Pager Sensor Pager - OMG Ikuku maka --lọ - $ 168 - OMG Solutions
Mfe Jiri Nlekọta Nlekọta!
Enweghị Ụgha na Ụlọ!
Ihe mkpuchi Motion Sentor Exit Ala na-ekpochapụ mkpọtụ na akwa ma ọ bụ n'ime ụlọ, nke nwere ike ịme ndị na-ahụ maka nsogbu kama ịkọsara onye na-elekọta ya site na pager.
Onye nlekọta nke pager mara
Onye na-elekọta Smart EA EA020 Caregiver Pager na Mkpu Mgbaàmà Motion maka ndị agadi na-eme ka onye nlekọta nke ọrụ onye obibi ahụ mara ọkwa site na pager mgbe onye bi na-ebili n'akwa, oche ma ọ bụ hapụ ụlọ ahụ.
Debe ya ebe ị chọrọ ya
Kwadoro site na (3) batrị AA (ejighị ya) ma ọ bụ ihe nkwụnye ọkụ na-arụ ọrụ AC nwere ike itinye ihe mkpuchi Motion Sensọ n'akụkụ ihe ndina ma ọ bụ n'ọnụ ụzọ. Mgbe ogwe ihe mmetụta na-achọpụta na arụ ọrụ pager - na-agwa onye na-elekọta ya.
Jiri nwayọọ - Ọ dịghị ndị nlekota egwu
Mfe idozi - tinye batrị na ọ dị njikere iji
Akpa sized pager - Ọ dị mfe ibu
E nwere ike itinye ụda mkpuchi motion site na akwa ma ọ bụ ọnụ ụzọ iji nyochaa omume ndị na-eme
Nzuzo 5242 1 Echiche Taa